Ama-Reuters Archives - Ilungelo Lethu lase-US Lokwazi
Imibhalo emisha yeMonsanto idalula ukuxhumana okuthokomele nentatheli yeReuters
Posted on April 25, 2019 by UCarey Gillam
Besazi ngemibhalo esivele ikhishwe ukuthi intatheli yeReuters uKate Kelland ubeyisixhumanisi esiyinhloko seMonsanto emzameni wayo wokubukela phansi nokuhlambalaza ososayensi beWorld Health Organisation's International Agency for Research on Cancer (IARC) ababeka i-glyphosate njenge-carcinogen engaba khona ngo-2015. unobufakazi obengeziwe bokuqina kokuxhumeka.
UKelland akazange abhale nje kuphela udaba lwango-2017 uMonsanto amcela ukuba alubhale ngqo ngendlela umphathi we-Monsanto uSam Murphey amcele ngayo ukuba ayibhale, (ngaphandle kokudalula kubafundi ukuthi uMonsanto wayengumthombo,) kepha manje sibona ubufakazi bokuthi uhlaka Indaba ehlukile uKelland ayenzile mayelana ne-glyphosate kwaba zilethwe eMonsanto ngaphambi kokuthi ushicilelwe, umkhuba ovame ukubukelwa phansi yizikhungo zezindaba.
Ama-imeyili akhombisa ukuthi indaba ebhalwe nguKelland yathunyelwa nge-imeyili kuMurphey enesihloko esithi “Uhlaka lwami, oluyimfihlo.”
Indaba, eyayinesihloko esithi "Ucwaningo olusha ngombulali wokhula waseMonsanto ukuze angene kuvoti elibalulekile le-EU," yayimayelana nokutholwa kokuqala kocwaningo olungashicilelwanga ngusosayensi wase-Italiya olukhombisa ukuthi amagundane okuhlola avezwe ku-glyphosate emazingeni alingana nalezo ezivunyelwe kubantu awakhombisanga kubi kwasekuqaleni ukusabela. Uhlobo lokugcina ishicilelwe ngo-Ephreli 13, i-2017.
Futhi enye i-imeyili esanda kukhishwa Imininingwane yokuthi izigxivizo zeminwe zikaMonsanto zazingenani ezinye izindaba ezimbili zaseKelland. I-imeyili kaMashi 1, 2016 ikhuluma ngokubandakanyeka kukaMonsanto Umkhankaso we- "Red Flag" endabeni esivele ishicilelwe yeReuters eyayigxeka i-IARC kanye nesifiso sokuthonya indaba yesibili efanayo iReuters yayihlela. IRed Flag yinkampani ese-Dublin-based PR kanye ne-lobbying firm esebenza ukuvikela ukuphepha kwe-glyphosate futhi ikhuthaze imiyalezo ye-pro-glyphosate ngokusebenzisa abantu besithathu njengamaqembu abalimi.
Ngokwe-imeyili eyakhiwe kabusha, "kulandela ukubandakanyeka kweRed Flag ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ucezu lokuqala lwalugxeka kakhulu i-IARC." I-imeyili iyaqhubeka: “Ungase futhi wazi ukuthi iRed Flag iyaxhumana neReuters mayelana nombiko wesibili ochungechungeni…”
Isikhathi esingaphezu kwenyanga kamuva, abakwaReuters bashicilela indaba kaKelland "Umbiko Okhethekile: Indlela i-World Health Organisation agency yomdlavuza edida ngayo abathengi."
Lezo zambulo zilandela ukuvezwa ekuqaleni konyaka wezincwadi ze-imeyili ezichaza ukuthi uKelland wasiza kanjani uMonsanto ukuba aqhube indaba engamanga ngososayensi womdlavuza u-Aaron Blair endimeni yakhe njengenhloko yeqembu elisebenzayo le-IARC elahlukanisa i-glyphosate njenge-carcinogen engenzeka. Ku-ternal Monsanto izincwadi yangomhla ka-Ephreli 27, 2017 ikhombisa ukuthi isikhulu esiphezulu seMonsanto uSam Murphey sathumela ukulandisa kwenkampani kuKelland nge indawo yesilayidi yamaphuzu okukhuluma nezingxenye zokufakwa kukaBlair ezingafakwanga enkantolo.
NgoJuni 14, 2017, uKelland wabhala indaba enempikiswano ngokususelwa kulokho athe “yimibhalo yasenkantolo,” lokho empeleni kwakuyimibhalo ayiphiwa nguMurphey. Ngoba imibhalo uKelland akhulume ngayo ayifakwanga ngempela enkantolo ibingatholakali esidlangalaleni ukuze ihlolwe amaqiniso ngabafundi. Ngokufaka ngamanga imininingwane ngokuthi isuselwa kumadokhumende asenkantolo wayegwema ukudalula iqhaza likaMonsanto ekuqhubeni le ndaba.
Lapho le ndaba iphuma, iveze uBlair njengokufihla "imininingwane ebalulekile" engatholi ukuxhumana phakathi kwe-glyphosate nomdlavuza ovela e-IARC. UKelland ubhale ukuthi ukufakwa kwemali kukhombisile ukuthi uBlair "uthe imininingwane ibizoguqula ukuhlaziywa kwe-IARC" noma ngabe ukubuyekezwa ukubekwa kwangempela kukhombisa ukuthi uBlair akashongo lokho.
UKelland akazange axhumanise nemibhalo ayikhombile, okwenza abafundi bangakwazi ukuzibona ukuthi uphambuke kangakanani ekunembeni.
Indaba yathathwa yimithombo yezindaba emhlabeni jikelele, futhi kukhuthazwe yiMonsanto kanye nabalingani bemboni yamakhemikhali. Izikhangiso zeGoogle zaze zathengwa zaphakamisa le ndaba. Le ndaba iphinde yasetshenziswa yiMonsanto ukuhlasela i-IARC ezingxenyeni eziningi, kufaka phakathi umzamo weMonsanto ukwenza iCongress ihlwithe imali kusuka ku-IARC.
Akukho lutho olungalungile ngokwemvelo ekwamukeleni iziphakamiso zezindaba ezizuzisa izinkampani ezivela ezinkampanini uqobo. Kwenzeka ngaso sonke isikhathi. Kepha izintatheli kumele zikhuthalele ukwethula amaqiniso, hhayi inkulumo-ze yenkampani.
Umhleli weReuters uMike Williams uvikele umsebenzi kaKelland futhi wenqabile ukukhipha ukucaciswa noma ukulungiswa kocezu luka-Aaron Blair. Uthe "Bekungucucu omkhulu, futhi ngimi eduze kwawo ngokuphelele." Umhleli “wezokuziphatha” wakwaReuters u-Alix Freedman naye uyayisekela indaba kaKelland kaBlair, yize kunobufakazi bokubandakanyeka kukaMonsanto nokungadalulwa kwalokhu kubandakanyeka kubafundi. "Siyaziqhenya ngakho futhi simi ngemuva," kusho uFreedman nge-imeyili.
Ngokwami, ngichithe iminyaka eyi-17 ngiyintatheli eReuters ngifaka iMonsanto futhi ngishaqekile ngalokhu kwephulwa kwezindinganiso zobuntatheli. Kuyaphawuleka ikakhulukazi ukuthi u-Alix Freedman ungumuntu ofanayo ongitshele ukuthi angivunyelwe ukubhala ngezifundo eziningi ezizimele zesayensi ye-glyphosate kaMonsanto ekhombisa imiphumela emibi.
Okungenani, uKelland bekufanele athembeke kubafundi futhi avume ukuthi iMonsanto yayingumthombo wakhe - kuleyo ndaba, futhi ngokusobala abanye abaningi. AbakwaReuters bakweleta umhlaba - ne-IARC - ukuxolisa.
Ngemininingwane engaphezulu ngalesi sihloko, bona lo mbhalo.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, Ukudla, glyphosate, IARC, journalism, Monsanto, Reuters
Posted on January 16, 2019 by UGary Ruskin
(Vuselela ngo-Ephreli 25, 2019)
Ama-imeyili akhombisa ukuthi indaba ebhalwe nguKelland yathunyelwa nge-imeyili ngaphambi kokuthi ishicilelwe eMurphey enesihloko esithi “Okusalungiswa Kwami, Okuyimfihlo.”
Futhi enye i-imeyili esanda kukhishwa Imininingwane yokuthi izigxivizo zeminwe zikaMonsanto zazingenani ezinye izindaba ezimbili zaseKelland. I-imeyili kaMashi 1, 2016 ikhuluma ngokubandakanyeka kukaMonsanto Umkhankaso we- "Red Flag" endabeni esivele ishicilelwe yeReuters eyayigxeka i-IARC kanye nesifiso sokuthonya indaba yesibili efanayo iReuters yayihlela. IRed Flag yinkampani ese-Dublin-based PR kanye ne-lobbying firm esebenza ukuvikela ukuphepha kwe-glyphosate futhi ikhuthaze imiyalezo ye-pro-glyphosate ngokusebenzisa abantu besithathu njengamaqembu abalimi. Ngokwe-imeyili eyakhiwe kabusha, "kulandela ukubandakanyeka kweRed Flag ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ucezu lokuqala lwalugxeka kakhulu i-IARC." I-imeyili iyaqhubeka: “Ungase futhi wazi ukuthi iRed Flag iyaxhumana neReuters mayelana nombiko wesibili ochungechungeni…”
Umhleli weReuters uMike Williams uvikele umsebenzi kaKelland futhi wenqabile ukukhipha ukucaciswa noma ukulungiswa kocezu luka-Aaron Blair. Uthe "Bekungucucu omkhulu, futhi ngimi eduze kwawo ngokuphelele."
Umhleli “wezokuziphatha” wakwaReuters u-Alix Freedman naye uyayisekela indaba kaKelland kaBlair, yize kunobufakazi bokubandakanyeka kukaMonsanto nokungadalulwa kwalokhu kubandakanyeka kubafundi. "Siyaziqhenya ngakho futhi simi ngemuva," kusho uFreedman nge-imeyili.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker U-Aaron Blair, UKate Kelland, Reuters, USam Murphey
Kungani intatheli ephenyayo uCarey Gillam engeke ayeke ukubhala ngeRoundup
Posted on July 30, 2018 by UStacy Malkan
Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane UCarey Gillam, glyphosate, Monsanto, Reuters, RoundUp
Amandla enkampani, hhayi intshisekelo yomphakathi, empandeni yokulalelwa kwekomidi lesayensi ku-IARC
Posted on February 5, 2018 by UCarey Gillam
(Ishicilelwe okokuqala ku- Izindaba Zempilo Yezemvelo)
Shaya elinye iphuzu lamandla ezinkampani ngokuvikelwa komphakathi.
Ummeli waseMelika uLamar Smith, ongusihlalo wekomidi le-US House of Representatives Committee on Science, Space, & Technology, usesimweni esibucayi ukulalelwa kwekomidi eligcwele kaFebhuwari 6 ene-ajenda ebhekiswe ngqo ekuhlaseleni abanye bososayensi abaphambili besifo somdlavuza.
Njengoba kunikezwe iqiniso lokuthi umdlavuza yiwo imbangela yesibili ehamba phambili yokufa e-United States, kubonakala kusobala ukuthi abenzi bomthetho bethu kufanele ukuthi basekele isayensi yomdlavuza kunokuba bazame ukuyivimba. Kodwa isenzo sikaSmith siza ngemuva kokuthi iWorld Health Organisation's International Agency for Research on Cancer (IARC) icasule iMonsanto Co ngenkathi ithi i-pesticide glyphosate, isithako esiyinhloko emikhiqizweni yokubulala ukhula kaMonsanto, ukuthi ingaba yisifo somdlavuza.
Yize ukulalelwa kunesihloko esithi “Ekuvikeleni Ubuqotho Kwezesayensi: Ukuhlola Uhlelo lwe-IARC Monograph kanye neGlyphosate Review, ” indida yesichazi ayilahleki kulabo abebelandela imizamo kaSmith yokwehlisa nokubuyisa imali kule nhlangano ecwaninga ngomdlavuza.
In izincwadi eziya kubaholi be-IARC, USmith uye waphindaphinda ukulandisa okungamanga nezindaba ezinganembile ezitshalwe ngabalingani bemboni yamakhemikhali, futhi wabalula “isimo esibucayi salokhu kukhathazeka okuhlobene nezindleko zamadola abakhokhintela.”
Kuyaphawuleka ukuthi uhlelo lokubeka i-International Agency for Research on Cancer esihlalweni esishisayo lwaqala ukusebenza eminyakeni emithathu eyedlule lapho uMonsanto abikezela ukuthi ososayensi bomdlavuza bamazwe omhlaba bazothola umbulali walo wokhula ukuthi angaba nomdlavuza. Inkampani Kusho okuningi kwezokuxhumana kwangaphakathi kuvezwe ngamacala asanda kwenziwa.
Le mibhalo ikhombisa nokuthi kwakungoFebhuwari 2015, inyanga ngaphambi kokwahlukaniswa kwe-IARC, lapho abaphathi beMonsanto babekwa khona uhlelo lwamasu ukudicilela phansi ososayensi bomdlavuza. Lolu hlelo lwenzelwe "ukuhlelela ukukhala ngesinqumo se-IARC."
Imizamo yokukhohlisa umbono womphakathi mayelana ne-IARC yanyuka ehlobo eledlule lapho amaMonsanto allies spoon-fed a ukulandisa okungamanga entathelini yeReuters okhiqize indaba yezindaba edubule umhlaba wonke futhi ube yindawo ebalulekile yokukhuluma ekuhlaselweni kwemboni yamakhemikhali ngokumelene ne-IARC.
Le ndaba ithembele ekubekweni kososayensi we-IARC ogama lakhe lingu-Aaron Blair futhi wabika ukuthi uBlair ufihle imininingwane ebucayi ebizoguqula ukuhlukaniswa kwe-IARC glyphosate. AbakwaReuters abakaze banikeze isixhumanisi sokufakwa, okwangaleso sikhathi esasingafakwanga kunoma iyiphi inkantolo futhi sasingatholakali emphakathini.
Usihlalo uSmith wagijimisana nendaba, wathi uBlair "uvumile ukuthi uyazi ukuthi lolu cwaningo belungavimbela" ukuhlukaniswa kwe-glyphosate njenge-carcinogen engenzeka.
Noma ngubani othatha isikhathi sokufunda empeleni ukubekwa, esidlangalaleni manje, ibizobona ukuthi uBlair akakaze asho into enjalo, futhi empeleni waphikisana kaningi ukuthi imininingwane okukhulunywa ngayo ayihlaziywanga ngokuphelele futhi ingashicilelwanga ngakho-ke ibingafanele ukubhekwa yi-IARC.
Ukulandisa okungamanga okufanayo okucindezelwe imboni yamakhemikhali futhi okuphindwe nguSmith kusolwa i-IARC ngokususa ukuhlolwa okungatholi ukuxhumana phakathi kwe-glyphosate nomdlavuza embikweni wayo wokugcina. USmith nethimba kungenzeka abazi noma abanendaba nokuthi ukususwa kwe-IARC bekuyizinto eziqinisekisiwe zeMonsanto zokuthi ososayensi bomdlavuza bathi akukwazanga ukufakazelwa.
Izikhulu ze-IARC Zinemininingwane amanga aqhutshelwa kubo yimboni yamakhemikhali kepha ukuzivikela kwehlele ezindlebeni ezingezwa.
IMonsanto idinga ukudicilela phansi ososayensi bomdlavuza bamazwe omhlaba ngoba bekuyi-IARC ekutholeni lokho kubangele amagagasi amacala ngokumelene neMonsanto, futhi kwagqugquzela izinyathelo zokuvimbela ikhemikhali kwamanye amazwe aseYurophu.
Kepha ngenkathi iMonsanto nezinye izimboni zamakhemikhali zikhathazekile ngezigidigidi zamaRandi emalini abayitholayo minyaka yonke kusuka emikhiqizweni esuselwa ku-glyphosate, ukuhlaselwa kwaleli qembu lesayensi elizimele kufanele sonke sikhathazeke.
Cishe amaphesenti angama-39 abesilisa nabesifazane abahlala e-United States kulindeleke ukuthi batholakale benomdlavuza ngesikhathi sokuphila kwabo, ngokusho kweNational Cancer Institute.
Ngalo nyaka kuphela, i-American Cancer Society ilinganisele ukuthi kuzoba nabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-1.68 abasanda kutholakala benomdlavuza kanye nabangaphezu kuka-600,000 ababulawa ngumdlavuza. Emhlabeni jikelele, kunezigameko ezingaphezu kwezigidi eziyi-14 zomdlavuza ezenzeka unyaka nonyaka, futhi lelo nani kulindeleke ukuthi lifinyelele ezigidini ezingama-22 ngonyaka ka-2030.
Umdlavuza "uthinta cishe impilo yawo wonke umuntu, ngqo noma ngokungaqondile," futhi ngaphezu kwemali ekhokhelwa impilo nempilo kubiza i-United States izindleko ezingaphezu kwezinkulungwane ezingama- $ 200 ezindlekweni zokwelashwa nokulahleka komkhiqizo, ngokusho koMnyango wezeMpilo waseMelika (HHS) .
Ukuze sinciphise ukufa kwabantu ngenxa yomdlavuza kufanele sigxile kakhulu ekuwunqandeni kwasekuqaleni, futhi ingxenye enkulu yalokhu “kuvimbela okuyinhloko” ngokusho kombiko wango-2016 weHHS National Toxicology Program (NTP) “ukuhlonza umdlavuza. ”
Ngokusobala, izinkampani ezithengisa amakhemikhali ahlanganiswe nomdlavuza zikhetha ukubona i-IARC ikhokhelwa futhi idilizwa. Basho okuningi ngokusebenzisa igama elingenakuqanjwa Umkhandlu Wokunemba Ekucwaningweni Kwezempilo Komphakathi (CAPHR), engenzi-nzuzo esungulwe yi-American Chemistry Council ngonyaka owedlule ngenhloso ethile ye- ukugqugquzela “ukuguqulwa”We-IARC.
Kepha ukubona abenzi bomthetho bethu bekhuthaza ngentshiseko izintshisekelo zenkampani lapho izintshisekelo ezinjalo zokuphepha komphakathi zisengozini mhlawumbe ukwehla okusha kwezepolitiki zaseMelika. Lezi ngokoqobo zibalulekile ngokuphila nokufa.
Izisebenzi zethu zikahulumeni kumele zibhekane nezinqumo zazo, zisekele ososayensi abasebenzela ukukhomba ama-carcinogens, baphinde babuyele emuva baphikisana nezintshisekelo zezinkampani ezifuna ukudicilela phansi isayensi esongela inzuzo yayo.
Ubuqotho besayensi kufanele busho ngqo lokho.
izibulala-zinambuzane I-American Chemistry Council, umdlavuza, Umkhandlu Wokunemba Ekucwaningweni Kwezempilo Komphakathi, ukulandisa okungamanga, Ukudla, glyphosate, IARC, UKate Kelland, Monsanto, I-NRDC, izibulala-zinambuzane, ezombusazwe, AmaRephabliki, Reuters, RoundUp, IKomidi Labamele I-US Yezesayensi, Ummeli waseMelika uLamar Smith
I-Monsanto Spin Doctors I-Target Cancer Scientist Ku-Flawed Reuters Indaba
Posted on June 19, 2017 by UCarey Gillam
Ekuhlanganisweni kwabezindaba okuhlelwe kahle futhi okuhlelekile, uMonsanto Co nabangane kuleli sonto baphonse ibhomu kubaphikisi abafuna ukufakazela ukuthi i-Roundup herbicide yenkampani ethandekayo ibangela umdlavuza.
A indaba esatshalaliswa kabanzi ishicilelwe ngoJuni 14 esiteshini sezindaba somhlaba wonke iReuters (engangikusebenzela phambilini) yabeka okubonakala kuyindaba eyihlazo yolwazi olufihliwe nososayensi oyimfihlo, izambulo "ezikhethekile" ukuthi le ndaba yathi zingaguqula ukuhlukaniswa okubucayi konyaka ka-2015 I-Roundup kaMonsanto yomdlavuza futhi kwadala amagagasi amacala amelene neMonsanto.
Kwakuyi-blockbuster yendaba, futhi kwaphindwa yizinhlangano zezindaba emhlabeni wonke, ziqhutshwa yimithombo yezindaba evela ezinhlanganweni ezisekelwa yiMonsanto kanye amacilongo abasebenzisana nomkhakha njengomkhandlu waseMelika Chemistry.
Kwakunamaphutha futhi kudukisa ngezindlela eziningi ezibucayi.
Ibhalwe yintatheli yeReuters uKate Kelland, onomlando wobudlelwano obuhle neqembu elixhaswe ngemali yinzuzo yezinkampani zezolimo, lesi siqephu sisole udokotela wezifo eziphezulu ovela e-US National Cancer Institute ngokwehluleka ukuhlanganyela imininingwane "ebalulekile" yesayensi nabanye ososayensi njengoba bonke basebenze ndawonye behlola i-herbicide glyphosate ye-International Agency for Research on Cancer (IARC). Lelo qembu libuyekeze ucwaningo olubanzi nge-glyphosate futhi lathola ngoMashi ka-2015 ukuthi umuthi wokubulala izinambuzane kufanele ubekwe njenge kungenzeka i-carcinogen yomuntu. Ukube iqembu belazi ngale datha elahlekile, isiphetho salo belingahluka, ngokusho kweReuters.
Le ndaba yanikezwa ngesikhathi esifanele i-glyphosate kanti iRoundup iphakathi nendawo yamacala amakhulu e-United States futhi ihlolisiswa ngabalawuli baseMelika nabaseYurophu. Ngemuva kokwahlukaniswa kwe-IARC, iMonsanto yamangalelwa ngabantu abangaphezu kwe-1,000 XNUMX e-United States abathi bona noma abathandekayo babo bathola i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) ekuvezweni yi-Roundup esekwe eMonsanto futhi inkampani namacala angaqala ukuya ukuqulwa kwecala ngonyaka ozayo. I-Roundup yi-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni futhi iletha izigidigidi zamaRandi ngonyaka eMonsanto. Le nkampani igcizelela ukuthi ukuhlukaniswa kwe-IARC akunamsebenzi futhi ikhemikhali likhonjwe liphephile ngamashumi eminyaka ocwaningo.
Yebo, bekuyindaba enkulu ethola amaphuzu amakhulu eMonsanto empikiswaneni yezokuphepha kwe-glyphosate. Kepha ukubhoboza ngokujulile ekuhlolweni nasekukhetheni kocezu lweReuters kuyenza icace le ndaba ukuthi ayinamaphutha amabi kuphela, kepha nokuthi iyingxenye yomzamo oqhubekayo futhi owenziwe ngokucophelela nguMonsanto kanye nemboni yezibulala-zinambuzane ukudicilela phansi umsebenzi we-IARC.
Le ndaba iqukethe okungenani amaphutha amabili abonakala eyiqiniso aya ekuthembekeni kwengqikimba yawo. Okokuqala le ndaba ibalula “imibhalo yasenkantolo” njengemithombo eyinhloko kanti empeleni amadokhumende okubhekiswe kuwo awazange afakwe enkantolo futhi ngenxa yalokho awatholakali esidlangalaleni ukuze izintatheli noma amalungu omphakathi awathole. UKelland akahlanganyeli ngezixhumanisi zemibhalo ayikhombayo kepha ukwenza kucace ukuthi imininingwane yakhe isuselwa kakhulu ekubekweni okuvela ku-Aaron Blair, iNational Cancer Institute epidemiologist owayengusihlalo weqembu elisebenzayo le-IARC ku-glyphosate, kanye nama-imeyili ahlobene namanye amarekhodi. Zonke zitholwe yiMonsanto njengengxenye yenqubo yokutholakala kwecala leRoundup elilinde enkantolo yaseSan Francisco. Ngokucaphuna amadokhumende asenkantolo, uKelland wayegwema ukukhuluma nokuthi ngabe iMonsanto noma ababambisene nayo bamnikeze amarekhodi noma cha. Futhi ngenxa yokuthi i-athikili ayizange inikeze isixhumanisi ekubekweni kwe-Blair, abafundi abakwazi ukubona ingxoxo ephelele yocwaningo olungashicilelwe noma ukuphawula okuningi okwenziwe nguBlair kwezinye izifundo eziningi okukhombisa ubufakazi bokuxhumana phakathi kwe-glyphosate nomdlavuza. Nginikeza ukuthunyelwa lapha, nokudalula ukuthi ngicelile futhi ngakuthola kubameli ababandakanyeka ecaleni le-Roundup ngemuva kokushicilelwa kwendaba kaKelland.
Okwesibili, le ndaba incike ngokwengxenye kumbono olwa ne-IARC wososayensi ogama lakhe linguBob Tarone futhi ubhekisela kuye njengochwepheshe "ozimele", umuntu "ozimele ngeMonsanto." UKelland ucaphuna uTarone ethi ukuhlolwa kwe-IARC kwe-glyphosate “kunamaphutha futhi akuphelele.” Ngaphandle, ngokusho kwe- imininingwane enikezwe yi-IARC, ITarone ikude kakhulu nokuzimela kweMonsanto; UTarone empeleni uvumile ukuthi ungumxhumanisi okhokhelwayo eMonsanto, futhi isiqeshana esicashunwe yiReuters futhi eyabhalwa nguTarone ngonyaka owedlule ephephabhukwini lezesayensi laseYurophu iyalungiswa kabusha ukuze ikhombise ukungqubuzana kwezintshisekelo kukaTarone, ngokusho kwe-IARC, ethi beyixhumana naleyo magazini.
Kepha okuphawuleka kakhulu kunamaphutha ukuthi indaba ikhetha kanjani ekukhetheni ekubekweni kweBlair. Le ndaba yazishaya indiva iziqinisekiso eziningi zikaBlair zocwaningo ezibonisa ukuxhumana kwe-glyphosate nomdlavuza, futhi wagxila kulwazi lukaBlair ucwaningo olulodwa olungashicilelwe lokho bekusaqhubeka. Le ndaba ikhuluma ngokuqagela ukuthi kungenzeka ukuthi idatha ingaqedwa futhi yashicilelwa ngesikhathi ukuthi ibuyekezwe yi-IARC nokuqagela okwengeziwe nguBlair, okuqhutshwa ngummeli weMonsanto, ukuthi ngabe bekuqediwe futhi ngabe kushicilelwe bekungasiza ekuphikiseni ezinye izifundo ezibukwe yi-IARC ezibonisa ukuxhumana okuhle komdlavuza.
Lolo cwaningo, oluyingxenye yomsebenzi omkhulu oqhubekayo wabaphenyi bakahulumeni wase-US obize i- Ucwaningo Lwezempilo Lwezolimo, kufaka amakhulu ezifundo kanye neminyaka yedatha ehlaziya imithelela yezibulala-zinambuzane kubalimi. UBlair, owathatha umhlalaphansi kwiNational Cancer Institute ngo-2007, wayengaholi kulolo cwaningo kodwa wayeyingxenye yethimba lososayensi okwathi ngo-2013 bahlaziya imininingwane ngokusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane kanye nengozi ye-non-Hodgkin lymphoma. Idatha eqondene ne-glyphosate ayikhombisanga ukuxhumana ne-NHL kepha ekusebenzeni ukushicilela iphepha mayelana nayo yonke imininingwane iqembu eliyiqoqile, banquma ukunciphisa ukugxila kwizinambuzane futhi ngo-2014 ushicilele iphepha kulowo msebenzi. Imininingwane ye-glyphosate ne-NHL isazoshicilelwa, kanti abanye ososayensi abajwayelene nomsebenzi bathi awulandelanga abantu isikhathi esanele ngokwanele ukuthi banikezwe i-NHL ngokuvamile kuthatha iminyaka engama-20 noma ngaphezulu ukuthuthuka. Ukuhlanganiswa kwangaphambili kwemininingwane ngabaphenyi be-AHS nakho okungakhombisi ukuxhumana phakathi kwe-glyphosate ne-NHL eshicilelwe ku-2005 futhi yabhekwa yi-IARC. Kepha ngoba idatha entsha ayishicilelwanga ayizange icatshangwe yi-IARC.
UBlair uthe isinqumo sokunciphisa umsebenzi oshicilelwe emithini yokubulala izinambuzane ukwenza idatha iphathwe kahle futhi yenziwe kahle ngaphambi kokuthi i-IARC imemezele ukuthi izobheka i-glyphosate e2015.
"Umthetho ubheka kuphela izinto ezishicilelwe," uBlair ungitshele kuleli sonto ngemuva kokushicilelwa kwendaba yeReuters. "Kungaba njani uma wonke umuntu eqenjini elisebenzayo ehlebela izinto azaziyo kodwa angashicilelwa bese ethatha izinqumo ngalokho?" I-IARC ikuqinisekisile ukuthi ayicabangi ngocwaningo olungashicilelwe. Esikhundleni sakhe, uBlair uthi akukho okushintshe umbono wakhe nge-glyphosate ne-NHL.
Isazi se-Epidemiologist kanye nososayensi wase-University of Toronto uJohn McLaughlin, owayehlala eqenjini elisebenza nge-glyphosate le-IARC noBlair, uthe kimi encwadini kuleli sonto ukuthi imininingwane ngomsebenzi ongashicilelwe obhalwe yiReuters ayizange iguqule umbono wakhe ngokuba semthethweni kwe-IARC isiphetho nge-glyphosate noma.
Okunye okushiywe ngaphandle endabeni yeReuters - ukubekwa kanye nekhophi esalungiswa yocwaningo okukhulunywa ngalo kukhombisa ukuthi kube nokukhathazeka ngemiphumela ye-AHS ngenxa yamaqembu amancane "amancane" wamacala aveziwe. Futhi okuphawuleka kakhulu, umbiko weReuters uyishiya ngaphandle ingxoxo kaBlair yeNorth American Pooled Project, lapho abamba khona iqhaza, equkethe nemininingwane ephathelene ne-glyphosate ne-NHL kepha ayihambisani neMonsanto. A amazwibela aloo phrojekthi eyethulwe kwi-International Society for Environmental Epidemiology ngonyaka ka-2015 ikhombisile ukuthi abantu abasebenzisa i-glyphosate iminyaka engaphezu kwemihlanu bakhulise kakhulu amathuba okuba ne-NHL, futhi ingozi nayo ibiphakeme kakhulu kubantu abaphethe i-glyphosate isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbili ngonyaka. Lolo lwazi, njengedatha entsha ye-AHS, aluzange lunikezwe i-IARC ngoba yayingakashicilelwa.
"Lapho kufakwa ingqikithi yediphozithi kaDkt. Blair isiyonke, kukhombisa ukuthi akukho lutho olugodliwe i-IARC," kusho ummeli kaPlaintiffs u-Aimee Wagstaff. Uthe iMonsanto ibisebenzisa izingcezu zesikhundla sayo "ukuqhubekisela phambili uhlelo lwayo kwabezindaba."
Ku-epidemiologist uPeter Infante, ochithe iminyaka engaphezu kwengu-20 ehola uphiko lokuhlonza umdlavuza e-Occupational Safety and Health Administration futhi wahlaziya ucwaningo lwe-epidemiology ku-glyphosate efakazela iKomidi Eliluleka Ngezesayensi Yezemvelo (EPA) ngoDisemba, ukunakwa ukudonselwa kwimininingwane engashicilelwe esekela isikhundla sikaMonsanto kuyisidina esikhulu ngalutho.
"Usenezinye izifundo ezibonisa impendulo yedosi," wangitshela. “Lolu Cwaningo Lwezempilo Kwezolimo akulona izinga legolide. Nge-glyphosate ne-NHL bebengalandeli abantu isikhathi eside ngokwanele. Noma ngabe imininingwane ibishicilelwe futhi yabhekwa yi-IARC bekungaba semongweni wayo yonke eminye imiphumela yokufunda. ”
Futhi ekugcineni, ngokukhishwa okungajwayelekile, le ndaba yehluleka ukudalula ukuthi uKelland uqobo unobuhlobo obuncane bokuhlangana noMonsanto nabangane. UKelland usize ukukhuthaza inhlangano ebizwa nge- Isayensi Media Center, iqembu inhloso yalo ukuxhuma ososayensi abathile abanjengoTarone nezintatheli ezinjengoKelland, futhi elithola imali enkulu kunazo zonke ezinkampanini ezibandakanya imboni yezolimo. Abaxhasi bamanje nabangaphambilini kufaka phakathi iMonsanto, umlingani ohlongozwayo wokuhlangana kukaMonsanto iBayer AG, iDuPont kanye nomkhakha wezolimo wezolimo iCropLife International. UKelland uvela ku- ividiyo yokukhangisa kwabakwaSMC betusa leli qembu futhi babhala nendatshana ebabaza i-SMC ebivele ku Umbiko wokuphromotha we-SMC.
Njengentatheli yeReuters iminyaka eyi-17 (1998-2015) ngiyazi ukubaluleka kwe- "exclusive." Lapho kunqwabelana onqenqemeni bezintatheli, amaphuzu ebhonasi amaningi kanye nokudumisa okuphezulu okuvela kubahleli. Luhlelo olubonwa ezinhlanganweni eziningi zezindaba futhi lusebenza kahle uma lukhuthaza ubuntatheli obunenkani, obunophenyo. Kepha izinkampani ezinamandla njengeMonsanto nazo ziyazi ukuthi izintatheli zikulangazelele kangakanani ukuthola umhlaba zodwa futhi ziyazi ukuthi ukunikezela izintatheli ezithandwayo imininingwane ekhethwe nge-cherry ngesithembiso sokukhetha kungasiza izidingo zazo zobudlelwano bomphakathi kahle kakhulu. Landela le ndaba efuthwe ngesandla ngokukhishwa kwabezindaba esitolo esikhokhelwa yimboni futhi ufuna kwenziwe uphenyo eqenjini lezimboni i-American Chemistry Council futhi une-propaganda yegolide.
Lokho ongenakho iqiniso.
(indatshana ivele okokuqala ku- Huffington Post)
Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane U-Aaron Blair, I-American Chemistry Council, Bayer, UBob Tarone, umdlavuza, ICropLife International, Dupont, Ukudla, glyphosate, IARC, UKate Kelland, Monsanto, izibulala-zinambuzane, Reuters, RoundUp, Isayensi Media Center